Nahazo andiany fahefatra ny andiany fahitalavitra SyFy's Anthology 'Channel Zero'. - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Nahazo andiany fahefatra ny andiany fahitalavitra SyFy's Anthology 'Channel Zero'.
Nahazo andiany fahefatra ny andiany fahitalavitra SyFy's Anthology 'Channel Zero'.
by Ryan T. Cusick Enga anie 4, 2018
nosoratan'i Ryan T. Cusick Enga anie 4, 2018
Vao tsy ela akory izahay no nahalala fa ny fandaharana malaza SyFy miorina amin'ny tantara fohy “CreepyPasta”, Channel Zero dia nahazo fizarana fahefatra mitondra ny lohateny Ny varavarana nofy. Satria mety fantatrao na tsy fantatrao ny andiany noforonin'i Nick Antosca, dia notendrena ho amin'ny Series Horror tsara indrindra ao amin'ny Loka iHorror 2018! Ity fizarana vaovao ity dia kintana Brandon Scott, Maria Sten, Steven Robertson, ary Steven Weber. Varavarana nofy Hiverina ny mpamokatra, mpanoratra ary mpanentana, Nick Antosca. Evan Katz (Heloka kely, Mampientam-po) hitarika ary koa mpiara-miasa vokatra.
Raha mila fanazavana momba ny fizarana farany indrindra dia manohiza mamaky etsy ambany ary aza hadino ny miverina mijery aminay bebe kokoa Channel Zero Vaovao.
Avy amin'ny gazety:
Miorina amin'ny tantara fohy "creepypasta" "Hidden Door" nataon'i Charlotte Bywater, CHANNEL ZERO: NY VAROTRA DREAM manaraka ny mpivady vao Jillian sy Tom, izay samy nitondra tsiambaratelo tamin'ny fanambadian'izy ireo. Rehefa mahita varavarana hafahafa ao amin'ny lakaly izy ireo dia manomboka mandrahona ny fifandraisan'izy ireo - sy ny fiainany ireo tsiambaratelo ireo.
Brandon Scott dia hilalao an'i “Tom Hodgson,” vadin'i Jillian (ary ny sakaizany indrindra amin'ny fahazaza), lehilahy mahay sy be fiheverana izay tena tia ny vadiny. Saingy sahirana izy rehefa mandrahona ny fanambadiana ny tsiambaratelo tamin'ny lasa.
Scott dia niseho tamin'ny fizarana fahatelo tamin'ny andiany, CHANNEL ZERO: BLOCK BUTCHER. Ny kaonty hafa amin'ny fahitalavitra dia misy ny "Guerrilla," "Grey's Anatomy," "The Middle," "Masters Of Sex," ary "Stitchers," ary koa ny andraikitra miverimberina amin'ny "Nicole Exactly Exactly." Vao tsy ela akory izay i Scott dia nitana andraikitra lehibe tao amin'ny sarimihetsika indie "Village People", ary nipoitra ihany koa tamin'ny "Stand-Up Guys" sy "Wreck It Ralph." Misolo tena azy ny Sweeney Entertainment sy ny mpanakanto manavao.
Maria Sten dia milalao an'i "Jillian Hope Hodgson," mpamorona tontolo iainana izay nanambady ny sakaizany akaiky indrindra. Vao nifindra tao amin'ilay trano nahalehibe azy izy ireo - trano antenain'izy ireo hiova, amin'ny alàlan'ny fahaizany mitambatra, ho trano fonenan'izy ireo nofinofy.
Vao tsy ela akory izay ny mpilalao sarimihetsika amerikanina Maria Sten vao niseho tao amin'ny "Straight Outta Compton" sy ny andian-tsarimihetsika nomerika "Persuasion." Sten no nanombohany ny sarimihetsika fohy voalohany "When It Burns" - izay nosoratany, notantaniny, novokariny ary nasiany kintana - tao amin'ny Uptown Short Film Festival sy LA Shorts Fest 2016. Solontenan'ny Grandview sy CAA izy.
Steven Robertson dia hilalao "Ian", mpiara-monina akaiky an'i Tom sy Jillian, mpianatra mpianatra mpianatra psykôlôjia misokatra izay tafiditra amin'ny traikefa hafahafa an'i Tom sy Jillian miaraka amin'ilay varavarana miafina ao amin'ny lakaly ambanin'izy ireo.
Robertson dia vao nahazo diplaoma tamin'ny fizarana tantara an-tsehatra malaza The Juilliard School. Vao tsy ela akory izay no nampiantranoany kintana tamin'ny andian-dahatsoratra navoakan'ny CBS “Elementary” ary nofonosiny fotsiny ilay famokarana tamin'ny horonan-tsary tsy miankina “Auggie.” Izy koa no lohalaharana amin'ny tarika rock monina any NY, Red Jetty. Misolo tena azy ny Gersh sy ny Echo Lake Entertainment.
Steven Weber dia hiverina indray amin'ny maha "Abel Carnacki", mpitsabo an'i Jillian. Efa ela izy no nihaino an'i Jillian hahafantatra momba ny olana atokisany sy ny niavian'izy ireo. Ny feony mangina, voafehy, saika sarotra vakina indraindray dia mahatezitra an'i Jillian, indrindra rehefa manandrana miresaka aminy momba izay izy - na iza - no tao ambadiky ny varavarana tao amin'ny lakaly ambanin'izy ireo.
Weber dia nitodika tany amin'ny sain'ny firenena noho ny anjara asany tamin'ny "Wings", izay nolalaovany nandritra ny fizaran-taona fito. Fantatra amin'ny anjara asany ihany koa izy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra "The Shining" sy amin'ny "The Kennedys of Massachusetts." Amin'ny sarimihetsika, Weber dia azo jerena ao amin'ny "Single White Vehivavy" sy "The Temp," ary koa ny mpilalao lohateny ao amin'ny hatsikana romantika pelaka, "Jeffrey." Vao tsy ela akory izay, Weber dia hita amin'ny anjara toeran'ny Mpanolo-tsaina Douglas Hamilton ao amin'ny "NCIS: New Orleans". Mipoitra koa izy ao amin'ny "Thirteen Reasons Why" amin'ny maha Principal Gary Bolan azy ary hiseho amin'ny vanim-potoana ho avy ny "Ballers." Nanao fampisehoana tao amin'ny Broadway tao amin'ny "The Real Thing", "The Producers" ary "The Philanthropist" ihany koa izy. Weber dia soloin'ny UTA sy Brillstein Entertainment Partners.
Momba ny SYFY:
SYFY dia marika haino aman-jery manerantany amin'ny multiplatform izay manome mpankafy siansa amin'ny karazany rehetra izao rehetra izao hiantsoana an-trano. Mankalaza ny karazany amin'ny endriny rehetra, ny SYFY dia manohana ireo mpankafy mafana fo miaraka amina foronina amin'ny siansa tany am-boalohany, nofinofy, fandaharana paranormal ary maherifo, fandrakofana an-tsary mivantana sy atiny sosialy sy sosialy. Ny marika dia ampiasain'ny SYFY WIRE (www.syfy.com), vavahady voalohany amin'ny famakiana ny vaovao, ny fomba fijery ary ny hevitra. SYFY dia tambajotran'i NBCUniversal, iray amin'ireo orinasam-pifandraisana sy fialamboly malaza manerantany. NBCUniversal dia zanaky ny Comcast Corporation.
Momba ny Universal Cable Productions:
Universal Cable Productions (UCP) dia mamorona atiny scripted vaovao manavao sy ekena ho an'ny sehatra media rehetra. Ny fehezan-keviny matanjaka dia misy: ny Emmy sy ny Golden Globe nahazo ny loka “Mr. Robot, "ny Golden Globe nanendry ny" The Sinner, "" Tsy voavaha: Ny famonoana an'i Tupac sy ilay malaza ratsy, "The Purge" ary "Suits" ho an'ny USA Network; "The Umbrella Academy" ho an'ny Netflix; "Fodiana" ho an'i Amazon; "John maloto" ho an'ny Bravo; "Faly !," "Ireo mpanao majia" ary "Channel Zero" ho an'ny SYFY; "Impulse" ho an'ny YouTube Red; ary "The Arrangement" ho an'ny E !. Ny tranombokin'ny atiny UCP dia misy ihany koa ireo mpitsikera sy mpankafy ankafiziny toa ilay «Monk» nahazo loka tamin'ny Emmy ary koa "Battlestar Galactica" ary "Psych." UCP dia ampahany amin'ny NBCUniversal Cable Entertainment, fizarana iray an'ny NBCUniversal, iray amin'ireo orinasam-pifandraisana sy fialamboly malaza eran-tany
Channel ZeroCREEPYPASTANick AntoscaSyFyNy varavarana nofy
Ryan T. Cusick dia mpankafy horohoro taloha hatramin'ny nijereny ilay horonantsary 'The Amityville Horror' tany am-boalohany tamin'ny faha-telo taonany. Nandehandeha tamin'ny horonantsary mahatsiravina i Ryan, nankafy ny resadresaka misokatra momba ny horohoro, ary nanatrika première Hollywood maro niaraka tamin'ireo mpamokatra sarimihetsika: Araho ao amin'ny Twitter ao amin'ny @ Nytmare112
Fahafahana farany ho anisan'ny 'INVERTED'
John Lithgow hilalao Jud Crandall amin'ny famakiana amin'ny laoniny 'Pet Sematary'
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (9) AppleTV + (4) Blu Rays (5) Horohoro amin'ny hatsikana (46) Tantara an-tsary (13) Facebook (andiany) (1) Angano (39) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (5) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (54) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,654) Sarimihetsika mahatsiravina (240) Horror Series (62) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (4) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (35) Resadresaka nifanaovana (andiany) (2) Horohoro LGBTQ (38) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (48) Sarimihetsika (14) Mozika (35) Netflix (sarimihetsika) (21) Netflix (andiany) (25) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (8) Shudder (sarimihetsika) (45) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (35) Sarimihetsika mivantana (66) Streaming Series (25) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (198) Tranofiara (andiany) (37) Heloka tena izy (43) Lalao video (178) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)